'उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्षका लागि योग्य छु’ - corporatekhabar : Nepals first corporate news magazine and portal
‘उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्षका लागि योग्य छु’
४० वर्ष देखी व्युटीपार्लर व्यवसाय गर्दै आएकी कमला श्रेष्ठ नेपालमा सफल अनि दिग्गज महिला उद्यमीको रूपमा चिनिन्छिन् । उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारी सदस्यमा तिन कार्यकाल बिताउँदै छन् । कमला श्रेष्ठ सौन्दर्य कला व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पनि हुन । उनीसँग सौन्दर्य व्यवसाय र महिलाहरूको सांगठनिक क्षमता र यात्राका विषयमा बसन्त अर्यालले गरेको कुराकानीः
तपार्इंले आफूलाई कसरी चिनाउनु हुन्छ ?
पायोनियर ब्युटिसियनको रूपमा नै चिन्छन् मलाई । पाटन जिल्लामा यो व्यवसाय गर्ने पहिलो व्यक्ति हुँ । मैले थाइल्यान्डबाट यो पेशा सिकेर यहाँ शुरु गर्दा काठमाडौं उपत्यकाममा यसबारेमा कसैलाई थाहा थिएन । ४० वर्षदेखि यही क्षेत्रमा निरन्तर लागि रहेको छु । मैले त्यो बेलामा क्रान्ति नै गरेर यो व्यवसाय स्थापित भएकी हुँ । यस भन्दा अघि नेपालमा महिलाहरू व्युटीपार्लर खोलेर बसेको मैले थाहा पाएको छैन । नेपालमा ब्युटीपार्लर व्यवसायकै जन्मदातताको रूपमा हेर्छु र अरूले पनि त्यसरी नै हेर्ने गरेका छन् ।
यो व्यवसायमा कसरी लाग्नुभयो ?
ब्युटी पार्लर व्यवसाय नेपालमा नभएको बेलामा थाइल्यान्ड बाट सिकेर आएकी हुँ । नेपालमा महिलालाई कुनै पनि व्यवसाय गर्न त्यतिबेला निकै गाह्रो थियो । मलाई मेरो परिवारले सहयोग गरेर म व्यवसयमा हात हाल्न सकेकी हुँ । आफ्नै घरमा ४० वर्ष अगाडि शुरु गरेको व्यवसाय सिटिइभिटीबाट मान्यता पाएको पनि २६ वर्ष भइसक्यो । सिटिइभिटीबाट मान्यता पाउने सायम इन्स्टीच्युट नेपालकै पहिलो टे«निङ इन्स्टीच्युट हो । टे«निङ गर्दा शुरुमा त महिला मात्र सहभागि हुन्थ्यो, पछि पुरुष पनि आउनुपर्छ भन्ने लागेर पुरुषलाई पनि टे«निङ दिदै अगाडि बढें ।
तपाईंले व्यवसाय शुरु गर्दा ब्यूटीपार्लरलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो थियो ?
बाउबाजेको पालादेखि ठाकुरहरूले कपाल काट्ने गर्थे । महिला यो क्षेत्रमा लाग्नु त त्यतिबेलाको समाजमा अपाच्य थियो । मैले मेरै घरमा कपाल काट्न शुरु गर्दा मान्छेले हेर्ने दृिष्टकोण नराम्रो थियो । अर्को समाजमा ब्युटीपार्लर भनेको के भन्ने नै थाहा थिएन । श्रंगारपटार त आफैं गरिहालिन्छ नि भन्ने थियो । त्यो बेला राणा परिवार र शाह परिवारका सदस्यहरू मात्र यो बारेमा थोरै जानकार थियो । अरूलाई बुझाउन त वर्षौं लाग्यो ।
ब्युटीपार्लर सम्बन्धी आम धारणा कस्तो पाउनुहुन्छ अहिले ?
मैले जतिबेला ब्युटीपार्लर व्यवसाय शुरु गरे, त्यतिबेला न त समाजलाई बुझाउन टेलिभिजन थियो । न त सामाजिक सञ्जाल नै थियो । यहाँ आएर जसले सेवा लियो त्यसले अर्कोलाई भन्ने ‘माउथ टु माउथ’ कुराकानीबाट नै यो प्रति मानिसहरू जानकार हुन थाले । २०४२ सालमा नेपाल टेलिभिजन प्रशारणमा आए पछि मैले ‘घर परिवार’ भन्ने कार्यक्रम चलाएँ । यो कार्यक्रममा सौन्दर्य सामग्री र कला बारे जानकारी दिन थाले पछि मानिसमा रुची हुन थाल्यो । पछि च्यानल नेपाल सेटललाइटबाट देशभर प्रशारण हुन थाल्यो । देशभरका मानिसले यसमा चासो राख्न थाले । मेरोमा टे«निङ इन्स्टिच्युटमा तालिम लिएर पछि उनीहरूले आफ्नै व्यवसाय पनि गर्न थाले । जिल्ला जिल्लामा सेमिनारहरू गरें, बल्ल सौन्दर्यकला सम्बन्धी जिज्ञासा बढ्न थाल्यो । अहिले नेपाल करिब ३ लाख व्युटीसियन रहेका छन् । यो देख्दा एकदम खुसी लाग्छ । अहिले त सरकारले पनि खरिदार र नायव सुब्बा सरहको पदमा व्युटीसियनलाई जागिर दिन थालेको छ । पहिला एसएलसी पास हुन नसके वा प्लस टु पास हुन नसके ब्युटीपार्लर सिक्ने भन्ने थियो अहिले डिग्री पास गरेका पनि यो पेशा अँगाल्न थालेका छन् ।
ब्युटीपार्लर जाने भनेको फजुल खर्च भन्ने पनि बुझाइ छ नि ?
हरेक मानिसको बुझाई फरक–फरक हुन्छ । अहिले ब्युटीपार्लर फजुल खर्च गर्ने ठाउँ भन्दा पनि केयर सेन्टर जस्तै बनेका छन् । हरेक मानिसलाई तन्दुरुस्त देखाउन उसले खानेकुरादेखि लगाउने कुरा सिकाउँछौँ । राम्रो कपडा लगाए जस्तै ब्युटीपार्लर जानु पनि आकर्षक बन्नु हो । व्यक्तित्व विकास गर्नु हो । ब्युटी सामग्री अहिले दैनदिनको आवश्यकता भइसक्यो । कुनै उत्सवमा जाँदा मानिसलाई नभइ नहुने भइसक्यो । आफ्नो लुकलाई ठिकठाक राख्छु भन्नु फजुल खर्च हुँदैन । तर आफ्नो क्षमता अनुसारको खर्च गर्नुपर्छ ।
तपाईंको व्यवसाय गर्दाका समस्या के कस्ता छन् ?
पहिला ब्युटीपार्लर भनेको बुझाउन गाह्रो भयो । अहिले धेरै ब्युटीपार्लर भए सम्हाल्नै गाह्रो । यो यस्तो संवेदशनशील क्षेत्र हो तर अहिले बिना मापदण्ड जसले पनि ब्युटीपार्लर खोल्ने गरेका छन् । मानिसको बाहिरी स्वरूप संग बढी सम्बन्धीत भएकोले यो सेन्सेटीभ हो । आफु दक्ष नभई ब्युटीपार्लर व्यवसय गर्दा धेरैलाई नकरात्मक असर पारिरहेको छ । मानिसको प्रत्यक्ष जिवन बाहेक ब्युटीपार्लर व्यवसयनै आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ । कमसल सामग्रीको प्रयोग, के गर्दा के हुने भन्ने ज्ञानको कमिका कारण यो क्षेत्रमा बेथिति बढेको छ । सरकारले कुनै मापदण्ड तोकोको छैन यसलाई व्यवस्थीत बनाउन । सरकारले मापदण्डका आधारमा गे्रड मात्र छुट्याउने हो भने पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।
अर्को सरकारले ब्युटीपार्लर व्यवसायलाई विलासिताको व्यवसाय भनेको छ । २ सय प्रतिशत सम्म कर लगाएको छ । यसबारेमा पनि सरकारले विचार गर्नु पर्छ । ब्युटी व्यवसायमा प्रयोग हुने सामग्री नेपालमै उत्पादन गर्न सरकारले प्रत्साहन गर्नु पर्छ ।
आफूले नेतृत्व गरेको संस्थासंग सम्बन्धीत व्यवसाय नै अव्यवस्थित हुँदा दुःख लाग्दैन ?
ब्युटी व्यवसायलाई ब्यवस्थित गर्न सौन्दर्य कला व्यवसायी महासंघ स्थापना गरेका हौ । यो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग् मिलेर धेरै काम गदै आएको छ । हाम्रो क्षेत्रका समस्या समाधानको लागि सरकारलाई बारम्बार घच्घचाइ रहेका छौं । हामीले दक्ष जनशक्ति निमार्णको लागि जिल्ला जिल्लामा सेमिनार तथा टे«निङका कार्यकम पनि गर्ने गरेका छौ । मैले यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि धेरै संघर्ष गरेकी छु । मलाई यसमा गर्व लाग्छ ।
तपाईं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा महिला सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाली सक्नु भएको छ । महिलाहरू व्यवसायमा अगाडि आउन नसक्नुको कारण के रहेछ ?
महिला व्यवसय क्षेत्रमा नभएका भन्ने त हुँदै होइन । हामिलाई दैनिक चाहिने चिज त महिलाले बनाउँदै आएका थिए । जस्तो जाडोमा लगाउने तातो लुगा त महिलले नै बुन्ने गरेका थिए । गाउँघरमा प्रयोग हुने गुन्द्री, सुपा पनि महिलाले बनाएकै हुन्थे तर महिला पुरुष सरह ठूला–ठूला आर्थिक गतिविधीमा समाहित भएनन् । महिलालाई पढ्न पठाइएन, महिला घरबाट बाहिर निस्कनै नपाउने अवस्थामा महिलाले कसरी व्यवसाय गरोस् । अब विस्तारै महिला पनि शिक्षीत भए राजनीति, सरकारी सेवा र व्यपार व्यवसायमा पनि आउँदै छन् ।
तर अझै पनि महिलाले पुरुषले जस्तो हिम्मत निकाल्ने गरेका छैनन् । महिला हुँ सक्दिनँ भन्ने मनोवृत्तिमा महिला डुबी बसेका छन् । यो पहिलाको समाजले महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणको कारण यस्तो भएको हो । महिलाले गर्न नसक्ने भन्ने केही हुँदैन, केवल आँट हुनुपर्छ । आफू अघि बढ्न चाहे केहीले रोक्दैन । महिलाहरूपनि बाहान बनाउने धेरै छन् काम गर्ने कम छन् त्यसैले महिला पछि परेका हुन् ।
तिन कार्यकाल सम्म तपाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारी सदस्यकै रूपमा बिताउँदै हुनुहुन्छ । अब महासंघमा तपाईंको भूमिका के ?
ब्युटीपार्लर व्यवसयमा मात्र आवद्ध भएर काम गर्दै गर्दा मलाई महासंघमा ल्याउन भवानी राणा, चण्डीराज ढकाल लगायतका उद्योमी साथीहरूको हात छ । धेरै व्यवसायी साथीले तपाई महासंघमा जानु पर्छ भनेकाले म चुनाव लडेको थिए जिते । पहिलो कार्यकाल त सिक्दैमा गयो त्यपछि फेरी निर्वाचन लडे फेरी जिते केहि काम गरे । मलाई महिला सभापति बनाइएको थियो महिलाहरूले कसरी व्यवसाय गरेका छन् भन्ने बारेमा धेरै बुझे । महिला उद्यमीहरूको लागि व्यवसाय सम्बन्धी टे«निङ गर्यो । अहिले तेस्रो कार्यकालमा म कार्यकारी सदस्यकै रूपमा छु । अब महासंघमा पनि सिनियर भइसकेको हिसाबले वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा लड्ने सोच बनाएको छु । मलाई धेरै साथीले नै तपाईं कहिलेसम्म कार्यकारी सदस्यको रूपमा मात्र बस्ने भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । महासंघमा तीन कार्यकाल राम्रोसँग जिम्मेवारी वहन गरेकाले उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सजिलै बहन गर्न सक्छु ।
प्रकाशित : १ पुष २०७५, आईतवार
सरकारले निर्णय धेरै गर्यो तर कार्यान्वयन गर्न कुनै सकेन
आत्मनिर्भर उद्योगमा बाह्य लगानी आवश्यक छैन
व्यवस्थापनमा जमेका विजय सागर
मुटुरोगको उपचारमा अब्बल डा मास्के
धरहरा निर्माणकाे लागि साईड किलिरेन्सको बाटो खुल्याे: काम अब तिब्र गतिमा